Mgbidi Mgbidi ahụ: Ngwọta Mbipụta Vetikal Maka Mgbidi Ime ụlọ ma ọ bụ N'èzí | Martech Zone
Mgbidi Mgbidi ahụ: Ngwọta Mbipụta Vetikal Maka Mgbidi Ime ụlọ ma ọ bụ N'èzí
Thursday, June 3, 2021 Thursday, June 3, 2021 Douglas Karr
Enwere m enyi m nke na-ese ma na-ete ọsịsọ mgbidi ma rụọ ọrụ dị ịtụnanya. Ọ bụ ezie na nka a bụ ego dị ịtụnanya nke nwere ike ịgbanwe ebe ọrụ ma ọ bụ ebe mkpọsa, ikike iji chepụta ma gosipụta ihe eserese na mbara ihu ga-ahapụkarị ịwụnye nrụnye ma ọ bụ nsụgharị onye na-ese ihe. Ihe omuma ohuru ohuru abiala nke gha agbanwe nke a, obu ezie na… vetikal mgbidi na-ebi akwụkwọ.
Igwe ihe eji ebi akwụkwọ nke Wall Printer na-enye ohere maka eserese elektrik nke nnukwu faịlụ eserese dijitalụ nke foto, ihe osise, eserese, ma ọ bụ akara ederede na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ime ime ma ọ bụ n'èzí. A haziri igwe ha iji bipụta n'ọtụtụ ebe gụnyere plasta, mpempe akwụkwọ, iko, nchara, brik, ihe, vinyl, na osisi.
N'ihe na-erughị afọ abụọ, The Wall Printer ereworị igwe ya karịa ụlọ ọrụ 40 na North na South America, na UK. Ndị na-ebi akwụkwọ kwụ ọtọ na-enye imirikiti ihe okike, nke bara uru, na nke na-atọ ọchị nke na-atụgharị gaa ezigbo ohere azụmaahịa maka ụlọ ọrụ na ndị ọchụnta ego nabatara ha.
Legodi ụfọdụ ndị ahịa na-eji ma ọ bụ na-eme atụmatụ iji igwe ndị ahụ:
Otu onye nkesa na Florida na nso nso a, MiArte na Naples FL, ka ha bipụtachara ya na 5'x 8 'ma tinye foto ha na Facebook kwuru,' 'O juru anyị anya na nzaghachi ahụ. ọ dị ka a ga-asị na ndị mmadụ na-eche ohere a. ” Otu onye ahịa zara ma were nkwekọrịta a na-ebi akwụkwọ Mgbidi a ka ọ bipụta agba asatọ 'square na mgbidi, wee tinye ya n'ime ụlọ, na -emepụta tebụl teepu.
Otu ngalaba egwuregwu D1 kachasị elu na-achọ ịzụta igwe TWP iji gosipụta na bọọlụ, basketball, na ebe egwuregwu na egwuregwu ndị ọzọ, yana na mgbidi ụlọ egwuregwu, tupu egwuregwu egwuregwu ụlọ.
Ndị na-achọ ime ụlọ azụtala igwe ahụ iji nyere aka na ijikọta ngosipụta nke ihe omume onwe onye nke ndị ahịa ha ma ọ bụ mkpa nka mgbidi na ebe obibi na azụmaahịa na ebe ọrụ.
Mgbidi Mgbidi Akụkọ
Dịka onye na-achụ nta ego bụ Paul Baron na-achọ ihe na-esote, ọ bịara hụ echiche ọhụrụ: ibipụta akwụkwọ kwụ ọtọ. Ọ bụ echiche ọhụrụ nye America mana amaara ọtụtụ afọ na Asia, India, Middle East, na Europe. Echiche nke eserese n'ime na n'èzí na-akwụ ọnụ ala maka ndị na-ese ihe na ndị nwe ụlọ masịrị ya. Iji bipụta na mgbidi nke ihe ọ bụla dị n'elu ala, n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi, masịrị ya.
Mgbe o lechara anya na ndị nrụpụta ole na ole na-enye teknụzụ ọhụụ, na 2019 Paul mechara nkwekọrịta ya na onye kacha ochie na onye nrụpụta ọrụ na Asia. Ọ họọrọ ha, ka o kwuru, n'ihi na ọnụ ahịa ọnụahịa na ọnụahịa jikọtara nke ọma na ogo nhazi na mgbakọ, yana nkwado iji nwee ike ịba ụba iji gboo mkpa nke ahịa North & South America.
Kemgbe ahụ, ụlọ ọrụ ahụ eresị ndị na-ekesa ihe na ahịa karịrị ahịa 20 ma nye aka guzobe azụmaahịa ọhụụ gafere mba US na Canada, South America, UK, na Puerto Rico. Ha na-akpọ ndị ahịa ọhụụ ka ha mụta banyere Mgbidi Mgbidi na ohere azụmaahịa gbara ọkpụrụkpụ ọ na-anọchite anya ya.
Mgbidi Mgbidi ga-agbasawanye na North na South America, UK, na Caribbean ngwa ngwa n'ime afọ ole na ole sochirinụ. Ka ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ mgbidi na-etolite, ụlọ ọrụ ahụ ga-akwado ha ezigbo azịza, ink, akụkụ, ọrụ pụtara ìhè, yana azụmaahịa iji gbasawanye ọrụ ha na-arụ na Wall.
Ọ bụ ezie na e jirila nkà na ụzụ dị n'azụ akwụkwọ kwụ ọtọ na mba ụwa ruo afọ ụfọdụ, ọ dị ugbu a maka azụmaahịa niile na North na South America.
Paul Baron, onye isi oche nke Wall Printing USA
Echiche ọhụrụ na-aga n'ihu na-apụta site na ndị na-ebi akwụkwọ Mgbidi ha ka ndị ahịa na-arịọ maka nka dijitalụ na ụdị ụdị ọ bụla, ma n'ime ụlọ ma n'èzí.
Mụtakwuo Banyere Mgbidi Mgbidi ahụ
Tags: mural obibi akwụkwọmụọmgbidi ngwa nbiputevetikal ebi akwụkwọmgbidi mgbidimgbidi nbipute
UltraSMSScript: Zụrụ SMS zuru ezu, MMS, na Voice Marketing Platform Na API